Ubuntu Touch OTA 18 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Isibuyekezo esisha se-Ubuntu Touch OTA 18 sisanda kukhishwa okusasekelwe ku-Ubuntu 16.04 kanye nezinguquko ku-OTA-18 ezigqama kakhulu ukuqaliswa okubuyekeziwe kwensizakalo ye-Media-hub, kanye nokwenza kahle okujwayelekile okujwayelekile kokusebenza nokusetshenziswa kwememori nokuningi.
1 Izindaba eziyinhloko ze-Ubuntu Touch OTA 18
2 Thola Ubuntu Touch OTA-18
Izindaba eziyinhloko ze-Ubuntu Touch OTA 18
Njengoba kushiwo ekuqaleni, lesi sibuyekezo esisha se- Ubuntu Touch iyaqhubeka kuhlobo lwe-Ubuntu 16.04, kepha kushiwo ukuthi ngemizamo yabathuthukisi kube nokwenzeka ukugxila emsebenzini wesikhathi esizayo ukulungiselela ushintsho oluya ku-Ubuntu 20.04.
Kwezinguquko ezigqame kule OTA entsha, a ukuqaliswa okubuyekeziwe kwensiza ye-Media-hub, enesibopho sokudlala izinhlelo zomsindo nevidiyo. Ku-Media-hub entsha, ukuxazululwa nezinkinga zokwelula ukuxazululwa, ukwakheka kwekhodi kushintshiwe ukuze kube lula ukuhlanganiswa kwemisebenzi emisha.
Kubuye kuqhakanjiswe lokho ukwenziwa kokusebenza okujwayelekile kwenziwa nokusetshenziswa kwememori, okuhloselwe umsebenzi onethezekile kumadivayisi afakwe i-1 GB ye-RAM.
Ikakhulu ukusebenza ngemuva kokunikeza isithombe sangemuva kwandisiwe- Ngokugcina ikhophi eyodwa kuphela yesithombe esinesixazululo esihambisana nokuxazululwa kwesikrini ku-RAM, uma kuqhathaniswa ne-OTA-17, ukusetshenziswa kwe-RAM kuncishiswe okungenani ama-30 MB lapho usetha isithombe sakho sangemuva kuze kufike ku-60 MB yamadivayisi ngokulungiswa kwesikrini okuphansi.
Ngakolunye uhlangothi, ukuboniswa okuzenzakalelayo kwekhibhodi ekusikrini kwanikezwa lapho uvula ithebhu entsha kusiphequluli, ngaphezu kwalokho ikhibhodi ekusikrini inikeza ithuba lokufaka uphawu «°» (degree), kanye ungeze isinqamuleli sekhibhodi Ctrl + Alt + T ukubiza i-emulator yokugcina.
Ewashini le-alamu, isikhathi sokuphumula semodi ethi "ake ngilale kancane" manje sesibalwa maqondana nokucindezela inkinobho, hhayi ukuqala kocingo. Uma kungekho ukusabela kusiginali, i-alamu ayicimi, ivele ime isikhashana.
Kungezwe ukusekelwa kwezitika kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo.
Iphephadonga likaLomiri lenziwe lasebenza kakhulu kule nguqulo.
Ekugcineni onjiniyela baphawula ngokushintshela ku-Ubuntu 20.04:
Okuthunyelwe kwethu kwangaphambilini kukhombe ukwehla kokuthuthuka kwe-Ubuntu Touch eXenial ngenkathi silungiselela una Uhlobo lwe-Ubuntu Touch olususelwa ku-Ubuntu 20.04. Kubonakala sengathi ukwehla okudumile kubukelwe phansi, uma kukhona .
Kuliqiniso ukuthi i-pequeño Ithimba labantu abaziyo abangaphakathi be-Ubuntu Touch belikhathazekile ngezinye izinto ngaphandle kwe-OTA-18. URatchanan ugxile ekutholeni uLomiri, ingqalasizinda ezungezile, nekhibhodi esebenza ku-systemd ku-Ubuntu 20.04; ekwakheni izithombe ze-UT ezisuselwa ku-20.04; nakweminye imisebenzi eminingi okufanele ibalwe.
Thola Ubuntu Touch OTA-18
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu Touch OTA 18 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
IMongoDB 5.0 iza nedatha ngendlela yochungechunge lwesikhathi, ukushintsha izinombolo nokuningi